[Farmaajo] oo ku dhacay shaxdii ay dejisay Kenya
Friday March 08, 2019 - 13:11:42 in Wararka by Ali Adan
Waagacusub.com- Af daboolan ma dahab baa? Aamusku marar badan buu ka fiican yahay hadalka badan iyo in arrin walba, gaar ahaan hawlaha iyo sirta dawladda fadhi-ku-dirir kasta looga hadlo, laakiin mararka qaarkoodna waa muhiim in madaxda dawladdu d
Waagacusub.com- Af daboolan ma dahab baa? Aamusku marar badan buu ka fiican yahay hadalka badan iyo in arrin walba, gaar ahaan hawlaha iyo sirta dawladda fadhi-ku-dirir kasta looga hadlo, laakiin mararka qaarkoodna waa muhiim in madaxda dawladdu dadwaynaha la socodsiiso qaraarada ay ka qaadato heshiisyada reebaya mahadhooyin fog isla markaana laga qanciyo wixii tuhun ah oo soo kala dhex gala shacabka iyo dawladda.
Hab dhaqanka noocaan ah wuxuu khatar ku noqon karaa jiritaanka Soomaaliya iyo mustaqbalka dhallaankeena waayo waxaa dhaci in dawladdu gasho heshiisyo aan laga fiirsan si buuxdana khubaro aqoon u leh usoo daraasadayn
Waxaa habboon in siyaasaddeena arrimaha dibaddu ay noqoto mid leh hadaf dheer oo aan aad isu bad-baddalin mar kasta oo dawlad cusub la doorto.Ka fakar siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Cid kasta oo Itoobiya xukunka u qabatay mar walba wuxuu hadafkooda kowaad ahaa inay Soomaaliya aysan midoobin, ciidan xoog lehna yeelan, gacantana ku dhigaan badda Soomaaliya, taasna waxaad mooddaa in Farmaajo hadda u fududeeyay Itoobiya. Akhri qoraalkaan dhaxal galka ah (Which way to the sea, please? by Nuraddin Farah ) ee qoraaga caanka ah ee Soomaaliyeed, Nuuraddiin Faarax, ka qoray damaca soo jireenka ah ee madaxda Itoobiya waligood ka lahaayeen badda Soomaaliya.